Ubeke phansi ushoki negeja, waqala ibhizinisi lendawo yokuvakasha nokungcebeleka. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
UMnu uLungani Mthembu, waseMpangeni, oGwini oluseNyakatho yeKwaZulu-Natali, usungule iPreme Adventures, ibhizinisi lendawo yokuvakasha enemidlalo ehlukene yokungcebeleka njengokuqwala intaba, ukugijima entabeni, i-quad biking neminye eliseSomopho Hills, Empangeni.
UMthembu uthi ukhule enesifiso sokuba wusomabhizinisi kodwa waqala ngokwenza izifundo zobuthisha e-University of Zululand, aziphothule ngo-2008.
“Ngemva kwalokho ngibe wuthisha iminyaka emihlanu, ngase nginquma ukushiya sengifuna ukufeza iphupho lami leminyaka lokuba wusomabhizinisi. Ngibe sengiqala inkampani yezolimo ngo-2013, ebengikhiqiza kuyona amaveji ehlukene,” kulanda yena.
Uthi ngaleso sikhathi ubevame ukuvakashela izindawo ezihlukene, nokuyilapho ahlangane khona nabantu abehlukene kubalwa nosomabhizinisi bezindawo zokuvakasha, nokuyibona abenze wagcina esenothando lwemboni yokuvakasha.
“Kuthe ngokubona ukuthi angikhulii kwezolimo ngafikelwa wumcabango wokuqala ibhizinisi lezokuvakasha ngenhloso yokufunda nokudlondlobala kwezamabhizinsi.
“Isunguleke kanjalo-ke iPreme Adventures ngoJuni wangonyaka odlule. Ngayo ngihlose ukuba wusizo kubantu bangasekhaya abakhonze ukungcebeleka, ngenze kube nendawo yokuvakasha abazokwazi ukuya kuyona kalula,” kusho uMthembu.
Izivakashi zithakasela i-quad biking ehlelwa yiPreme Adventures eSomopho Hills eMpangeni, eKZN
Uthi okwenza iPreme Adventures yehluke ezimbangini wukuthi inentaba othi uma umi kuyona ubone ilanga liphuma futhi idayisa imikhiqizo ehlukene yesiNtu ngaphakathi. Babiza uR250 kuya phezulu ngemidlalo eyenziwa khona.
Uthe igama layo liyakhula kubantu njengoba nesibalo sabayivakashelayo sinyuka. Uthe ziyafika nezivakashi eziqhamuka kwezinye izifundazwe.
Naye njengabanye osomabhizinisi zikhona izinselelo abhekana nazo. “Ngisaqala ngike ngabhekana nenkinga yokuthi umphakathi wangasekhaya ubungayiqondi kahle iPreme Adventures, nokuphoqe ukuthi ngiwufundise ngayo ukuze ugcine uqonda ngokuphelele ukuthi kwenziwani khona.”
Izivakashi ziqwala iSomopho Hills eMpangeni, eKZN
“Kwesinye isikhathi kuyenzeka sibe nenkinga yamakhasimende abhalisa ukuthi azoza kodwa agcine engafikanga, okwenza silahlekelwe yimali asuke ebekise ngayo, nathi siphazamiseke ngoba sisuke sesiwahlelele,” kusho yena.
Uthi nokho loko akumphazamisi kangako, kunaloko kumqinisa ukhakhayi, kwenze aqhubeke nokusebenza ukusimamisa ibhizinisi lakhe.
Unezifiso ezinkulu ngebhizinisi lakhe. “Ngifuna ukuthi iPreme Adventures yaziwe umhlaba wonke, idobe nezivakashi zakwamanye amazwe,” kuphetha uMthembu.
Facebook: Preme Adventures/Lungani Somopho Mthembu